देश लुटिहेछन्, नेतृत्व मौनतामा रमाइरहेछन् - साक्षी खबर देश लुटिहेछन्, नेतृत्व मौनतामा रमाइरहेछन् - साक्षी खबर
बैशाख ३१, २०७७ | ३०३ पटक पढिएको | साक्षी खबर
देशले रगत मागेँ बलि चढाउनू मलाई यस्तै स्वरको गीत बज्दै थियो त्यो बुढो रेडियोमा म चाहि सधै झै आज पनि बिहानै मुख नै नधोई बेडमै फेसबुक खोलेँ । यसो न्यूजफिड हेर्दै थिए । एउटा साथीले शेयर गरेको समाचारमा सगरमाथा चिनमा भएको दाबी गरेछ भन्ने लेखेको थियो । पहिले त लाग्यो झुटो समाचार हो तर छिटोछिटो समाचार भित्र गएर पढ्न थालेँ ।
(CGTM) Chaina Gloal Television Network ले टुइट गरेको रैछ । धेरै नै रिस उठ्यो तर मेरो रिस घरमा त मतलब हुँदैन झन् राष्ट्रलाई को ? को त्यो स्व्रmीनसट गरेर साथीलाई पठाएँ । उसले भनी, “ म पनि छक्क परेकी छुँ । विश्व कसरी बचाउने भन्ने बेला यो चिनलाई देश कसरी बढाउने भन्ने के भाको होला ? उसले पनि प्रश्नमै कुराकानी टुङ्ग्याई । सिजिङ पिङ आएर गएको ६ देखि ७ महिना पनि भएको छैन र अहिले सगरमाथा गइसक्यो ! गइसक्यो ? छ्या के भनेकी होला मैले नि फेरि आफै माथि रिस उठ्यो । मनभित्र आगो त धेरै बलिसकेको थियो ।
यदि साच्चै हाम्रो देशलाई अरु देशले लग्यो भने कुन देशले धेरै भाग लैजाला, भारत या चिन ? भारतले त धेरै ठाउँहरु लगिसकेको छ अझै कति लैजाने हो, थाहा पनि छैन । गिद्धले जसरी आखा गाडेर बसेको छ हाम्रो देश माथि दार्जीलिङ्ग, सिक्कीमले नपुगेर लिपु पनि लगिसक्यो । कोसी, महाकालीको पानी त अझ कहाँ बिर्सीनु । त्यति ठुलो अङ्गे्रजसँग लडेर बचाएको नेपाल हेर त आज कति सजिलै मेरो–मेरो भन्छन् अरुले ।
देशभक्तिको आगो भनू या वीरताको भनू या मातृभूमि बचाउने । मनमा भावनाको यूद्ध सुरु भैसकेको थियो जसलाई म रोक्न नै सक्थेँ न त रोक्न नै चाहान्थ्येँ । यदि साच्चै हाम्रो देशलाई अरु देशले लग्यो भने कुन देशले धेरै भाग लैजाला, भारत या चिन ? भारतले त धेरै ठाउँहरु लगिसकेको छ अझै कति लैजाने हो, थाहा पनि छैन । गिद्धले जसरी आखा गाडेर बसेको छ हाम्रो देश माथि दार्जीलिङ्ग, सिक्कीमले नपुगेर लिपु पनि लगिसक्यो । कोसी, महाकालीको पानी त अझ कहाँ बिर्सीनु । त्यति ठुलो अङ्गे्रजसँग लडेर बचाएको नेपाल हेर त आज कति सजिलै मेरो–मेरो भन्छन् अरुले ।
साँच्ची शिर नभएको आमा तिमी राख्न सक्छौँ ? नेपाल आमा मरेको हेर्न सक्छौँ ? मृतक शरिरसँग रहन सक्छौ ? ‘सगरमाथाको देश’ भन्ने भनाई गुमाउन सक्छौँ ? वीर नेपाली कायर बने भनेर स्वीकार्न सक्छौँ ?
‘लिपुलेक हाम्रो हो’ भन्ने जनताका घरका भित्तामा टासेको त केही हुन्थ्यो कि ? तर टासिएन र अहिले लिपुलेक भारतको नक्सामा टाँसिएको देख्दा मन नै भारी हुन्छ भन्या । जति नै वीर नेपाली कहलिए पनि आफ्नो देशको भाग बचाउन सकिएन क्यारे ! धिक्कार छ त्यस्ता नेतालाई जो अरुबेला केही नगरी चूनावका बेला वीरताका गीत गाउँदै हिड्छन् । हामी नेपाली आमा पनि कति अभागी रैछिन् ।
भारतले पाउ लगिसक्यो र अब चीनले शिर लैजाने तर्खरमा छ । यो यूगमा म तरवालले प्रहार गर्न त सक्दिन तर शब्दका प्रहार गर्न सक्छु त्यी सारा नेता र जनतालाई यो कुरालाई नजर अन्दाज गर्न खोजिरहेछन् ।
साँच्ची शिर नभएको आमा तिमी राख्न सक्छौँ ? नेपाल आमा मरेको हेर्न सक्छौँ ? मृतक शरिरसँग रहन सक्छौ ? ‘सगरमाथाको देश’ भन्ने भनाई गुमाउन सक्छौँ ? वीर नेपाली कायर बने भनेर स्वीकार्न सक्छौँ ? आफ्नो मातृभूमि टुक्र्याउन सक्छौँ ? अनि ८८४८ मिटरको शिर झुकाउन सक्छौँ ?